पलेसाले पाराओलम्पिक खेल्ने पक्का : RajdhaniDaily.com
HomeNot-to-be-missedपलेसाले पाराओलम्पिक खेल्ने पक्का
काठमाडौं । नेपाली पारातेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोवर्धनले टोकियो पाराओलम्पिक गेम्स २०२० खेल्ने पक्का भएको छ । नेपाल तेक्वान्दो संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै पलेसाले वाइल्डकार्डमार्फत पाराओलम्पिकका खेल्ने पक्का भएको जनाएको छ ।
जापानको टोकियोमा आगमी १७ देखि १९ भाद्रसम्म आयोजना हुने पाराओलम्पिकमा गोवर्धनले के ४४, ५८ केजीमुनिको प्रतिस्पर्धामा पहिलोपटक नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न लागेकी हुन् । नेपाली पारातेक्वान्दो खेलाडीले गत जेठमा जोर्डनको अम्मान सहरमा पाराओलम्पिकका लागि छनोट प्रतियोगिता खेल्नुपर्ने भए तापनि कोरोना महामारीका कारण अन्तर्राष्टिय हवाई उडान बन्द हुनुका साथै उक्त छनोट प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न विदेशी खेलाडीले तेस्रो मुलुकमा कम्तीमा २ साता आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बाध्यताका कारण छनोट प्रतियोगिताबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।
छनोट प्रतियोगिताका लागि पलेसालगायत ६ खेलाडीलाई संघले चयन गरेको थियो । तसर्थ उक्त छनोट खेलबाट वञ्चित भएपश्चात् नेपाल तेक्वान्दो संघले पलेसा र रञ्जना धामी (के. ४४, ४९ केजी)को नाम राष्ट्रिय पाराओलम्पिक कमिटीको समन्वयमा वाइल्डकार्डका लागि पहल गरेको थियो ।
पलेसा गोवर्धन विश्व तेक्वान्दो महासंघको १३औं वरियतामा रहेको र विश्व तेक्वान्दो महासंघ एवं अन्तर्राष्ट्रिय पाराओलम्पिक कमिटीबाट नेपाललाई १ मात्रै कोटा दिने व्यवस्था भएकोले नेपाली पारा राष्ट्रिय खेलाडी पलेसा गोबर्धनले के. ४४, ५८ केजीमुनि तौल समूहमा वाइल्डकार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको संघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाली राष्ट्रिय पारातेक्वान्दो खेलाडी पलेसा गोबर्धनले नेपाल तेक्वान्दो संघअन्तर्गत रहेको पारा राष्ट्रिय टिममा २०७२ सालदेखि नियमित तालिम तथा प्रशिक्षण लिइरहेकी छन् । पलेसाले भियतनामको होचिमिन्ह २०१८ मा आयोजित चौथो एसियन पारातेक्वान्दो ओपन प्रतियोगितामा पहिलो पकट के. ४४, ५८ केजीमाथि तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल भई मुलुकलाई कास्यपदक दिलाएकी थिइन् ।
यस्तै उनले पहिलोपटक कोरियामा आयोजना भएको तेस्रो एसियन अन्तर्राष्ट्रिय पारातेक्वान्दो ओपन प्रतियोगिता २०१७ मा के. ४४, ५८ केजीमुनि तौल समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्दै पाँचांै स्थान प्राप्त गर्न सफल भएकी थिइन् । सोही वर्ष लन्डनमा आयोजित सातांै विश्व पारातेक्वान्दोमा पाँचांै, पाँचांै एसियन पारा तेक्वान्दो प्रतियोगितामा पाँचौं, आठौं विश्व पारातेक्वान्दो प्रतियोगितामा पाँचांै स्थान प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।
नेकपा दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी समिति बैठक जारी, आज के निर्णय हुँदैछ ?